Raw Bromelain poids hplc≥XUMX% | AASraw dia manala vovoka
/ Products / Plant Extract / Bromelain vovoka
Sokajy: Plant Extract
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram ka hatramin'ny baoritra bromelain, eo ambany fitondran'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Bromelain dia ny proteinina azo avy amin'ny tahony ny anana, na dia misy aza any amin'ny faritra rehetra amin'ny zavamaniry sy voankazo hafakely. Ny fitrandrahana dia manana tantaram-panafoana ny medikaly. Amin'ny maha-tsiranoka azy, dia azo ampiasaina ho toy ny mpihinan-tsolom-boly izy, amin'ny fanafody maro karazana sy fikarohana momba ny mety ho fiantraikany amin'ny aretina.
Bromelain video vovo
Vola bromelain roah fototra Characters
Name: Bromelain vovoka
Raw Bromelain rotso
Ny Bromelain dia fantatra ihany koa amin'ny toeram-pandihizana anana anana, anja anana anana.
Bromelain Raw bromelain Rohroain Usage
Tsy misy fanafana farafaharatsiny.
Fampitandremana amin'ny bromelain mena
Ny Bromelain dia tsy voaporofo ara-tsiansa fa mahomby amin'ny fitsaboana aretina hafa ary tsy nankatoavin'ny fitondrana amerikana mahazatra sy ny fitsaboana ny fitsaboana ny aretina rehetra. Any Etazonia, ny andalan-tsoratra momba ny Health Supplement Health and Education Act (DSHEA, 1994) dia mamela ny fivarotana bromelain izay misy ny sakafo fanampiny, na dia tsy voamarina aza ny heriny.
Ankoatra ny papain, bromelain dia iray amin'ireo proteinina malaza indrindra ampiasaina amin'ny fanovozan-kena. Ny Bromelain dia amidy amin'ny endrika volo, izay mifangaro amin'ny marinade, na mivantana mivantana amin'ny hena tsy voamaina.
Ahoana ny hividianana vovoka Bromelain avy any AASraw